दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने ? जान्नुहोस् यी कुराहरु – Online Nepal
दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने ? जान्नुहोस् यी कुराहरु
July 8, 2020 184
काठमाडौं – कहिलेकाही दाँतमा विभिन्न खाले समस्या देखा परेर सताउने गर्छ । दाँतमा कुनै समस्या आएमा देखाएर हिड्न पनि लाज हुन्छ । दाँतले मानिसको सुन्दरतामा फरक पार्ने हुनाले यसको सुरषा गर्नु निकै जरुरी छ । दाँतको काम खाना चपाउनु मात्र होइन अन्य धेरै काम गर्छ ।
त्यसैले यसलाई जोगाउनुपर्दछ । दाँतलाई बिभिन्न समस्याबाट जोगाउन बिभिन्न घरेलु उपायहरु पनि छन् । दाँत माझ्नु परेमा नरम र सफा ब्रसको प्रयोग गनुृपर्दछ । खानाअघि र पछि नियमित ब्रस गर्नुपर्छ । दाँत माझ्दा तलमाथि, दायाँबायाँ गरी राम्रो सँग ३ मिनेटसम्म माझ्नुपर्छ ।
दाँतमा केही अल्झिएमा कुनै छेस्को प्रयोग गर्नुहुदैन । अत्यधिक पदार्थ पनि सेवन गर्नुहुँदैन । चकलेट वा गुलियो खानेकुरा पनि धेरै खानुहुँदैन । कुनै कडा बस्तु टोक्नु पनि हुँदैन । खाना वा खाजा खाइसकेपछि मुख कुल्ला गरेर अड्केको निकाल्नुपर्छ । दाँतमा सामान्य दुखाइ भएमा नुनपानीले मुख कुल्ला गर्न सकिन्छ ।
Prevछोरी जन्मेपछि प्रमोद खरेलले भोगेको बरर आशु झार्ने पिडा – २१ दिनमा बल्ल छोरीको न्वारन
Nextविभिन्न रोग निको पार्ने पुदिनाका यस्ता छन् फाइदाहरु
उमेरले ४० लागेपछि यस कारण जाग्छ फेरी बैस
दशैँ नजिकिदै गर्दा सरकारको यस्तो योजना।
ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्र’माण दिन तयार छु: डा. बाबुराम भट्टराई
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50913)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45280)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43304)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37937)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (36182)